गोरखाकी फुन्जो लामा सबैभन्दा कम समयमा सगरमाथा आरोहण गरेर रेकर्ड राख्दै । - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गोरखाकी फुन्जो लामा सबैभन्दा कम समयमा सगरमाथा आरोहण गरेर रेकर्ड राख्दै ।
Published On : २ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०८:१५
दरौंदी: वि.स. २०४३ सालमा गोर्खाको छेकम्पार बुर्जी गाउँ (चुम भ्याली) मा एउटा सामान्य परिवारमा जन्मेकी फुन्जो लामा भोली साझ चार बजे सगरमाथा चढ्दै छिन्। पायोनियर एडभोकेटको व्यबस्थापन तथा पासांग तेन्जी शेर्पाको पथप्रदशर्नमा आरोहणको लागि फुन्जो अहिले आधार सिभिरमा छिन्। सबैभन्दा कम समयमा सगरमाथा आरोहण पुरा गरेर नयॉ रेकर्ड राख्ने उनको योजना छ। पुरुषहरुतर्फ यो रेकर्ड भए पनि हालसम्म कुनै महिलाको नाममा यो रेकर्ड छैन । पहिलो प्रयास नै फुन्जोले गर्दै छिन् ।